Xiaomi POCO M3 ဆန်းစစ်ခြင်း - အသွင်အပြင်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ထင်မြင်ချက်များ | Androidsis
Xiaomi POCO M3 ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - ၎င်းရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များနဲ့ထိုက်တန်ရဲ့လား။
Rafa Rodríguez Ballesteros | 08/04/2021 18:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 11/04/2021 10:52 | reviews
ဒီနေ့မင်းတို့ယူလာပြီ အလွန်အထူးပြန်လည်သုံးသပ် နှင့်လည်းအလွန်အမင်းမျှော်လင့်။ ကျနော်တို့ကစမ်းသပ်နိုင်မှအလွန်ကံကောင်းခဲ့ကြပြီ Xiaomi Poco M3။ ဒီနေ့စမတ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟုသုတရှိသူအားလုံး Poco Phone F1 သည်ဈေးကွက်တွင်ပေါ်ပေါက်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိရသည်.
မည်သည့်နေရာမှမဆိုအမည်မသိစက်တစ်ခုသည်လူတိုင်း၏အာရုံကိုဆွဲယူနိုင်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတောင်မှ F1 ဟာစမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ထောက်ခံချက်တွေထဲမှာရှိနေဆဲပါ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စျေးနှုန်းအကြားကောင်းသောချိန်ခွင်လျှာကိုဆက်ကပ်။ ဒါပေမယ့် Poco မိသားစုဝင်အသစ်များရောက်ရှိနေပြီ Poco M3 ဟာအရေးအပါဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်ဖို့နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်စေရန်။
1 ရှုပ်ထွေးသောမရှိဘဲကုမ္ပဏီ POCO
2 Poco M3 ကိုဖြုတ်ခြင်း
3 ဒါက Poco M3 ပါ
4 Poco M3 မျက်နှာပြင်
5 Poco M3 ထဲမှာဘာရှိလဲ။
6 Poco M3 ကင်မရာ
7 M3 နှင့်ရိုက်ထားသောဥပမာများ
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ထိုလွှတ်တင်မှု မှစ၍ ကုမ္ပဏီမှပြောင်းလဲခဲ့သည်Redmi လိုပဲ တရားဝင်“ Xiaomi” နှင့်“ လွတ်လပ်သော” အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်တရားဝင်ခွဲထားသည်။ ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးထုတ်ကုန်နှင့်အတူစျေးကွက်ကိုလှုပ်ခါနိုင်ခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ရှေ့တွင်ကျော်ကြားမှုနှင့်အတူဤအချက်ကိုပေးသောလုံခြုံရေးနှင့်အတူ Poco M3 သည်အခြားကြီးကျယ်သောစက်ပစ္စည်းတစ်ခုရောက်လာသည်။
Poco X3 ကိုပေါက်ကွဲစေပြီးနောက်၎င်းကုမ္ပဏီသည်စျေးကွက်၏အမြင့်ဆုံးfollowersရိယာတွင်နောက်လိုက်များကိုခြစ်ရာချနိုင်ခဲ့သည်။ M3 နှင့်အတူ, Little သည်အလယ်အလတ်တန်းစားပေါင်မုန့်ကောင်းတစ်ကွက်ကိုလည်းရရှိရန်ခိုင်မာသည့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အမြဲပြောသကဲ့သို့ ပုံသေနည်း ၎င်းသည်ရရှိရန်ခက်ခဲသကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။ ကောင်းသောစျေးနှုန်းမှာကောင်းသောထုတ်ကုန်.
အဆိုပါ Poco M3 ဖြစ်ပါတယ် အစစ်အမှန်အကောင်းဆုံးရောင်းချသူဖြစ်လာရန်ကိုခေါ် စျေးကွက်အပေါ်ရုံအောက်မှာလေးလနှင့်အတူ 2021. စဉ်အတွင်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာရရှိနိုင်၏စတော့ရှယ်ယာကုန်အောင်နိုင်ခဲ့သည် ရောင်းအားအားလုံးနည်းလမ်း၌တည်၏။ စင်စစ်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာကို ရောင်းအားတွေအများကြီး နောက်လာမည့်လများအတွင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ဤစမတ်ဖုန်းသည်သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာသာဖြစ်လျှင်ယခုသင်ရရှိနိုင်သည် Gshopper မှာ LITTLE M3 အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း။
Poco M3 ကိုဖြုတ်ခြင်း
ကျနော်တို့အမြဲတမ်းလုပ်ချင်သလိုပဲ box ကိုဖွင့်ဖို့အချိန် အတွင်းထဲ၌တွေ့သမျှအရာအားလုံးကိုစစ်ဆေးပါ။ ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ရှာမတွေ့ပါ မအံ့သြပါဘူး သို့မဟုတ်ခြွင်းချက်သောဘာမှ။ သို့သော်ထိုသို့ပြောပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်များစွာသောစွန့်ပစ်သောအရာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားသည့်အခြားအရေးကြီးသည့်အရာများရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘဲကြီးမားတဲ့ဘက်ထရီရှိတယ်၊ သေးငယ်တဲ့ဘက်ထရီနှင့်အတူများစွာသောအခြားဖုန်းများထက်အလေးချိန်လျော့နည်း။ ကျနော်တို့ကိုလည်းရှာပါ ဒေတာကေဘယ် နှင့် format နဲ့အတူဤကိစ္စတွင်အတွက် load USB အမျိုးအစား C။ ပြီးနောက် ပါဝါအားသွင်းစက်အချို့ထုတ်လုပ်သူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အရေးကြီးသောအပိုတစ်ခုအဖြစ်ရှိသည် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆီလီကွန်လက် ၎င်းသည်ဖုန်းနှင့်လက်အိတ်ကဲ့သို့ကိုက်ညီပါသည်။ စမတ်ဖုန်းအသစ်အတွက်အစမှအမြဲတမ်းလိုအပ်သည့်ပထမ ဦး ဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းရှိခြင်းသည်အသေးစိတ်ဖြစ်သည်။ မဟုတ်ရင် အမြန်စတင်လမ်းညွှန် နှင့်ဂန္ထဝင် အာမခံသက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ.
၏အဆွေခင်ပွန်းမှကျေးဇူးတင်ပါတယ် @Gshopper_USA ကျနော်တို့စိတ်ကူး POCO M3 စမ်းသပ်နေကြသည်။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကို unboxing အနည်းငယ်ထားခဲ့ပါ။ ပြန်လည်သုံးသပ် pic.twitter.com/oZ4CdtDzl9
- Androidsis (@androidsis) ဧပြီလ 4, 2021
ဒါက Poco M3 ပါ
Androidsis မှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းထင်ရှားတယ် သီလမူရင်းအဖြစ် နှင့်မည်သည့် device ကို၏ဒီဇိုင်းအတွက်ရဲ။ ယခုလက်ရှိအချိန်သည်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်အခြားအရာများကိုခွဲခြားရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်ရည်ရွယ်ချက်အလုံအလောက် ရှိ၍ ကုန်ပစ္စည်းကိုအခြားပစ္စည်းများနှင့်မတူနိုင်ပါ။ Poco M3 ကကွဲပြားတယ် နှင့်အပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်အများကြီးတန်ဖိုးထားတစ်ခုခုပါပဲ။
ပထမဦးဆုံးအရာ အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် Poco M3 သည်သင်၏လက်၌ကိုင်ထားခြင်းဖြစ်သည် သူမ၏နောက်ဘက်။ လမ်းက သုံးဆကင်မရာ moduleအကြောင်းနောက်မှအသေးစိတ်ပြောပါမည်။ အထက်ပိုင်းတွင်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ အလွန်ကြီးစွာသော ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်နှင့်အတူစတုဂံ နှင့်၎င်း၏အထက်ပိုင်းအတွက်အလျားလိုက်တည်ရှိပြီးကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်း။ သငျသညျကိုပိုမိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းကြိုက်နှစ်သက်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူကမူရင်းဖြစ်ပြီးကြီးလှ၏။
နောက်ဘက်တွင်လည်း ကျနော်တို့အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများမီးမောင်းထိုးပြရန်ရှိသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုပို။ ပို။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာနေသည် ပလပ်စတစ်၏ရွေးချယ်မှုတစ်ခုအောင်မြင်မှု IS။ နှင့် ချောဒဏ်ခံကြောင်းကြမ်းတမ်း finish ကိုPoco M3 သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ IMHO အများကြီး တောက်ပသောကျောထက်ပိုကောင်းသည် ထုတ်တစ် swatch ဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်ကြောင်းပွတ်ချောနှင့်အတူ။
၁၅% လျှော့စျေးဖြင့် POCO M3 ကိုဤနေရာတွင်ဝယ်ပါ
ပလတ်စတစ်သည်ဖက်ရှင်ကျပြီး ပို၍ ခေတ်မီသောတင်ဆက်မှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသတ္တုစပ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဖြည့်စွက်ကာ ချုပ်ကိုင်အများကြီးရအထူးသဖြင့် silicone အမှုမပါဘဲ rအဆိုပါပြန်တယ်နှင့်ဖြစ်နိုင်သောခြစ်အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်.
ထဲမှာ နောက်ပိုင်း တူညီသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ပစ္စည်းများကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးမျက်နှာပြင်ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန်ဆိုးရွားသည့်အနား၊ ချွန်ထက်သောအနားများနှင့်တိကျစွာပေါင်းစည်းထားသည်။ နှစ်ဖက်စလုံးကိုကြည့်လိုက်တော့အဲဒါကိုဘယ်လိုရွေးလိုက်သလဲဆိုတာကြည့်ရအောင် လက်ဗွေဖတ်စက် ဘေးထွက်။ က သည်အခြားထုတ်လုပ်သူများဖျက်သိမ်းတက်အဆုံးသတ်သောတည်နေရာသို့သော် Sony ကဲ့သို့သောအခြားသူများသည်ရလဒ်ကောင်းများနှင့်ဆက်ပြီးလောင်းနေကြသည်။
ဒါ့အပြင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသောလက်ဗွေစာဖတ်သူကိုအထက် home ခလုတ် ကျနော်တို့နှိပ်လျှင်, ငါတို့ရှာပါ အသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်မှု တစ် ဦး elongated button ကိုအတူ။
ထဲမှာ ထိပ်ဆုံး က 3.5 jack ကို plug ကို နားကြပ်။ The ဘယ်ဘက် သာရှိပါတယ် ဗန်းနှင့်အတူ slot က ကဒ်များအတွက်။ ၎င်းသည်အရေးကြီးသည်ကိုအလေးပေးပါ သုံးဆဗန်း Micro SD format နဲ့ SIM ကဒ်နှစ်ခုနဲ့ memory card ကိုတစ်ပြိုင်နက်ထည့်လို့ရတယ်။ ထဲမှာ အောက်ခြေ ဘယ်ဘက်မှညာသို့တွေ့နိုင်သည် မိုက်ခရိုဖုန်းအဆိုပါ connector ကိုအားသွင်း လက်ဆောင်အမျိုးအစား USB အမျိုးအစား Cနှင့်၎င်း၏တစ်ခုတည်းသော စပီကာ.
Poco M3 မျက်နှာပြင်
ဤကိရိယာသည်ဤကိရိယာ၏အင်အားအကောင်းဆုံးကဏ္ of တစ်ခုဖြစ်သည်။ Poco M3 မျက်နှာပြင်သည်ကျန်ရှိနေသေးသောအလယ်အလတ်အဆင့်ရှိမိုဘိုင်းဖုန်းများမှထင်ရှားပေါ်လွင်စေသည်။ ငါတို့တွေ့တယ် ရက်ရက်ရောရော 6,53 လက်မအရွယ်အစားထက်ပို panel ထဲမှာ က IPS ကမ်းလှမ်းသည် HD Plus resolution အပြည့် နှင့် 60 Hz Refresh Rate။ တူညီတဲ့စျေးနှုန်းအကွာအဝေးမှာတည်ရှိပြီးကြောင်းဖုန်းများအတွက်ရှာဖွေရန်ခက်ခဲတစ်ခုခု။
ယေဘုယျစည်းမျဉ်းတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယူရိုတစ်ရာ့ငါးဆယ်ဝန်းကျင်ရှိသောအလယ်အလတ်တန်းစားကိရိယာကိုရှာဖွေသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောအရာများကိုစွန့်လွှတ်ရမည်ကိုသိကြသည်။ အဓိကတစ်ခုကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်သေးငယ်ပြီးအားလုံးနိမ့်သော resolution ထက်ပိုသောမျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်။ ဤတွင် M3 ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ stomping ရောက်ရှိလာသည် ပိုပြီးသီးသန့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်းပါ။ ဒါကြောင့်သင်ပြီးသားယုံကြည်စိတ်ချထားပြီးလျှင် ဒီမှာကလစ်နှိပ်ပါသင်၏ဥစ္စာ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း.
La ရှုထောင့်အချိုး 19.5:9 ၎င်း၏ panel ၏အရွယ်အစားကိုပြသပြီးဗီဒီယိုနှင့်မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများကိုသက်သောင့်သက်သာဖြင့်ပျော်မွေ့ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဲဒါရှိတယ် တစ်လက်မသိပ်သည်းဆနှုန်းမှာ 395 pixels ကို (dpi) ၎င်းကိုအလွန်ပျော်စရာကောင်းသည့်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်စေသည်မှာသေချာသည်။ ဤအရာသည်ခြားနားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောကဏ္inတွင်ထင်ရှားစေသည်။
Poco M3 မျက်နှာပြင်တွင်aကိရိယာရှေ့မျက်နှာပြင်နေရာ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းသို့ရောက်ရှိ အတူတူ။ အသုံးပြုသောထစ်အမျိုးအစားအားဖြင့်ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းအတွက်အောင်မြင်သောကောင်းသောဆက်ဆံရေး။ ငါတို့မှာaCorning Gorilla Glass3ဖန်သားရေကာကွယ်မှုအဆင့်၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်ကာကွယ်မှုစံသတ်မှတ်ချက်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်အချို့သောပေါက်ပေါက်များနှင့်ခြစ်ရာများကိုကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ရှေ့ကင်မရာကိုရုတ်တရက်အနည်းဆုံးနည်းဖြင့်“ ဝှက်” ရန်အဖြေမှာaအားဖြင့်ဖြစ်သည် ထစ်အမျိုးအစားကို drop။ ဒီထစ်အမျိုးအစားကိုဖက်ရှင်လို့ပြောနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိတွင်းလို့ခေါ်တဲ့တွင်းတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြပေမယ့် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ထားနိုင်သည့်အားနည်းချက်များတစ်ခုဖြစ်သည် ၎င်း၏တောက်ပသောကြွင်းသောအရာမှတက်မဟုတ်ပါဘူး အလွန်ရှင်းလင်းသောအခါများ၌မျက်နှာပြင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖတ်ရန်ခက်ခဲသည်။
Poco M3 ထဲမှာဘာရှိလဲ။
Poco M3 အတွင်းပိုင်းသယ်ဆောင်လာသည့်အရာအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်သည်။ ဒီအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့စမတ်ဖုန်းကိုဘာတွေတပ်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာကိုပြောပြဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ၊ ပြီးတော့သူကစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရာကိုသိချင်ရင်။ M3 ကို Vitamin လုပ်ဖို့အတွက်ငါတို့သိထားတဲ့ချစ်ပ်တစ်လုံးတွေ့ရှိခဲ့တယ် Qualcomm မှ SnapDragon 662 ။ ပရိုဆက်ဆာကို Redmi9အတွက် Oppo, Motorola, Nokia, Realme သို့မဟုတ် Xiaomi ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်သူများကယုံကြည်ကြသည်။
ငါတို့တစ်ခုတွေ့တယ် Octa Core CPU သည်4Core နှင့်အတူ 2.0 GHz နှင့်အခြား4သည် 1.8 GHz တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ဂရပ်ဖစ်အပိုင်းကိုဖုံးလွှမ်းထားသည် GPU ကို ထို့အပြင်၏ Qualcomm, အ Adreno 610။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းများကိုအဓိပ္ပါယ်ပြwithoutနာများမပါဘဲနှင့်အလွန်ချွန်သောဂရပ်ဖစ်များဖြင့်ပြသနာမရှိဘဲကစားနိုင်သည်။
Poco M3 တွင်ဗားရှင်းနှစ်မျိုးရှိသည် ရမ်ဤအခါသမယတွင်ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည့်ကိရိယာရှိသည်4GB ကိုနှင့်အတူတစ် ဦး ထက်ပိုအစွမ်းထက်ဗားရှင်းလည်းမရှိပေမယ့်6GB ကို။ ၏စွမ်းရည် သိုလှောင်မှု ကဖြစ်ပါတယ် 64 GB ကိုနှင့်အတူတူပင်လမ်းအတွက်စွမ်းရည်နှင့်အတူဗားရှင်းရှိပါတယ် 128 GB ကို။ Micro SD ကဒ်ကိုအသုံးပြုပြီးမှတ်ဉာဏ်ချဲ့နိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်။
Poco M3 ကင်မရာ
အကယ်၍ ဖန်သားပြင်သည်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါက၎င်းသည်၎င်း၏ကင်မရာနှင့် ပတ်သက်၍ မတူနိုင်ပါ။ ဖြစ်ကောင်း ကျနော်တို့အများကြီးပိုမိုမြင့်မားမျှော်လင့်ချက်များရှိခဲ့ပါတယ်။ Poco M3 သည်အလယ်အလတ်တန်းစားနှင့်အခြေခံအကျဆုံးပစ္စည်းများ၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းရှိကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းသတိရရန်လိုအပ်သည်။
သူကပြောသည်မှာ M3 ကင်မရာကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဓာတ်ပုံအချို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးနိုင်သည်။ သူသည်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာကာကွယ်ပြောဆိုနိုင်ရုံသာမကဘဲဒါလည်းပါသေးတယ် အလွန်ထိုက်တန်သောဖမ်းယူပူဇော်သက္ကာဘို့နိုင်စွမ်း အသေးစိတ်မြင့်မားသောအရောင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူ။ မျက်စိဖြင့်ဖမ်းစားနိုင်သည့်ကင်မရာမော်ဂျူးတစ်ခုသည်aတစ်ခုချင်းစီကိုတစ် ဦး ချင်းစီကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များရှိပါတယ်ရှိရာသုံးဆမှန်ဘီလူး နှင့်ကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ် function ကို။
အတွက် အဓိကမှန်ဘီလူး Little ကတစ် ဦး အာရုံခံကိရိယာရှိခဲ့ပါတယ် Samsung S5KGM1 အမျိုးအစား Isocell၏ resolution နှင့်အတူ 48 megapixels နှင့်ဖွင့်လှစ် 1.79 ဗဟိုချက်. La ရှေး အဆိုပါမျက်ကပ်မှန်၏တစ် ဦး ရှိပါတယ် Omnivision အာရုံခံကိရိယာ OV02B10 အမျိုးအစား CMOS အမျိုးအစား ၂.၄။ တစ် ဦး resolution ကိုရှိပါတယ်2megapixels နှင့်စောင့်ရှောက်မှုကြာပါသည် ပုံသဏ္modeာန် depthုံအတိမ်အနက်ကို၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်ရန်။ The တတိယ အဆိုပါမှန်ဘီလူး၏တစ် ဦး အာရုံခံကိရိယာရှိပါတယ် Hynix HI-259 သည်လည်း CMOS ကိုရိုက်သည်အတူတူ focal aperture နှင့်အတူတူပင် resolution ကိုအတူ2megapixels။ ဒီအာရုံခံကိရိယာသည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရိုက်ကူးရန်တာဝန်ရှိသည်။
အတွက် selfie ကင်မရာ ရှေ့, ငါတို့က Omnivision OV8856 အမျိုးအစား CMOS အာရုံခံကိရိယာ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူဤကိစ္စတွင်အတွက် 8 megapixels နှင့်ဖွင့်လှစ် 2.0 ဗဟိုချက်။ အရည်အသွေးကောင်းသည့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများသို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံများရိုက်ခြင်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောကင်မရာနှင့် resolution ။
Poco M3 တွင်မှားယွင်းမည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုနိုင်သည် အလွန်လျောက်ပတ်သောကင်မရာအပိုင်း။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ, ကျနော်တို့မှတ်ချက်ပြုထားပြီးအဖြစ်, အကောင့်ထဲသို့ထည့်သွင်းသောစျေးနှုန်းအကွာအဝေးကိုယူပြီး။ သောကြောင့် Poco M3 သည်စွမ်းအားအရှိဆုံးသောရှုထောင့်များစွာကိုပေါင်းစပ်။ မယှဉ်နိုင်သည့်ကိရိယာဖြစ်လာနိုင်သည်။ POCO M3 ကသင့်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးပါက၊ နောက်တဖန်မစောင့်ပါနှင့် 15% လျှော့စျေးနှင့်အတူဤနေရာတွင်ဥစ္စာဝယ်ပါ.
ကင်မရာမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပိုမိုလက်တွေ့ကျသောစိတ်ကူးထားရန်၊ စမ်းသပ်ဖို့ငါတို့ထွက်သွားပြီ ဒီမှာမင်းတို့လုပ်ထားတဲ့ဖမ်းယူနမူနာအနည်းငယ်ကိုမင်းတို့ချန်ထားခဲ့တယ်။
ဒိီပုံထဲဲမွာ, M3 ကင်မရာ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုသည်၎င်း၏လှပတင့်တယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်မည်သည့်စက်ကိရိယာ၏မဆိုကင်မရာများဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ပွင့်လင်းပတ်ဝန်းကျင်၌ကောင်းသောသဘာဝအလင်း၌မိမိတို့အကောင်းဆုံးကိုဆက်ကပ်။ သို့သော်ဤဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တကယ်တန်ဖိုးထားတယ် အရောင်များ, Las ပုံစံများ ပင်ချဲ့ခြင်း, ရှေ့တန်းရှိဒြပ်စင်။
ဒါဟာမလွှဲမရှောင်လည်းဖြစ်ပါတယ် အဝေးဆုံးနေရာ၌ဆူညံသံအချို့ကိုစတင်သတိပြုမိလာသည် နှင့်လိုင်းများအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးရ။ ထို့အပြင်ဓာတ်ပုံရိုက်သောဒြပ်စင်များကလွှမ်းမိုးသောအရာ။
ဤတွင်ကျွန်တော်တစ် ဦး အတွက်တန်ဖိုးထားနိုင်ပါတယ် မိုးလုံလေလုံဓာတ်ပုံအဖြစ် ကွဲပြားခြားနားသောအရိပ်များနှင့်အရောင်များ သူတို့သစ္စာရှိရှိမျိုးပွား။ ကျနော်တို့အားထုတ်မှုကိုသတိထားမိ ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ တဖန်သင်တို့လည်းတစ် ဦး ရ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကောင်း.
ဤသည်၌ အသေးစိတ်ဖမ်းယူ၎င်းသည်အလွန်ရှင်းလင်းစွာပြသသည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ပစ္စည်းများအတွက်အသေးစိတ်။ သာ။ ကောင်း၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ပိုကောင်းတဲ့အလင်းရောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အတိအကျ, ပြတ်သား၏ကောင်းသောအဆင့်ကို ဗဟိုအရာဝတ္ထုပေါ်မှာ။
ဒီမှာငါတို့ထားလိုက်တယ် POCO M3 ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာချဲ့ခြင်း။ ၎င်းသည်နေရာတော်တော်များများယူပြီးကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးရှိသောဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်သည်။
zoom အားလုံးကိုအသုံးချလိုက်ခြင်းဖြင့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် resolution များစွာပျောက်ဆုံးပြီးဆုံးရှုံးသွားသည် pixel တွေပေါ်လာတယ်။ ၎င်းသည်အရာဝတ္ထုများကိုနီးကပ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ဤပုံပျက်မှုအဆင့်ရှိသောဓာတ်ပုံကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။
MIUI ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကင်မရာ application ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြိုက်တယ်။ ရင်တောင်မှ အမြင်အာရုံကအတန်ငယ်သမ္မာသတိရှိကြလော့ အလွန်yရာမမဟုတ် လက်တွေ့တွင်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးထိရောက်မှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောချိန်ညှိချက်များအားလုံးနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သောပိုမိုအဆင့်မြင့်သောသူများအတွက် extras အချို့ပင်ရှိသည်။
ငါတို့မှာရှိတယ် အမျိုးမျိုးသောဓာတ်ပုံရိုက် Modes သာ အရာများထဲမှတကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ဖမ်းယူနိုင်သည့်ပုံတူမုဒ်ကိုထုတ်ပေးသည်။ စိတ်ထဲမှာထားရမယ့်အချက်တစ်ချက်ကဒါပါပဲ ကျွန်တော်တို့ကင်မရာကသူ့ရဲ့အင်အားအကြီးဆုံးလက်နက်တွေထုတ်ပေးချင်တယ်ဆိုရင် နှင့်ဓာတ်ပုံများကျနော်တို့အများဆုံးရပါလိမ့်မယ်အများဆုံးအရည်အသွေးကိုရယူပါ 48MP option ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပါ.
အတွက် ဗီဒီယိုများ ငါတို့မှာရှိတယ် time-ချုံး နှင့် နှေးကွေးသောလှုပ်ရှားမှု။ ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုလုံးကရလဒ်ကောင်းတွေရတယ်။ ကျနော်တို့ထွက်သယ်ဆောင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံများ သို့မဟုတ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခု စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါ စာရွက်စာတမ်းများ.
ကျနော်တို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ကိုရပ်တန့်နိုင်ဘူးကင်မရာဖြစ်ပါတယ် ဓါတ်ပုံတွေကိုပြုပြင်တဲ့အခါနှေးလာတယ်။ ဖမ်းယူမှုတစ်ခုနှင့်နောက်တစ်ခုအကြားအာရုံခံကိရိယာထပ်မံရရှိနိုင်ရန်ဖုန်းသည်စက္ကန့်အနည်းငယ်လိုသည်။ ပုံရသည်တစ်ခုခု ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအခြေခံပြီးသင့်အားအနာဂတ်မွမ်းမံမှုများတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
ဤတွင် Poco ပြုလုပ်သူများသည် M3 ကိုအခြားသူများနှင့်မတူအောင်တစ်ဖန်ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဘက်ထရီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏ဖြစ်ခဲ့သည် နီးပါးအမြဲတမ်းအနည်းဆုံးအချက်။ အာရုံခံကိရိယာများ၊ ဖန်သားပြင်ကြီးများနှင့်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်းတို့ကြောင့်လက်ရှိထုတ်ကုန်များ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပ်တန့်သွားသည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။
Poco M3 သည်အတားအဆီးနှစ်ခုကိုချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့သည် ဘက်ထရီနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အပိုင်းတွင်။ စမတ်ဖုန်းများတွင်ဘက်ထရီအားသွင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကူးယဉ် ဦး ထုပ်တစ်ခုရှိပြီးပုံနှိပ်ထုတ်လွှင့်မှုမြင့်မားသောဆိပ်ကမ်းများမရှိပါ။
Poco M3 ၏အင်္ဂါရပ်များ မယုံနိုင်လောက်အောင် ၆၀၀၀ mAh ဘက်ထရီ။ ထိုမှတပါး, အတူ ကြာချိန်နှစ်ခုအပြည့်အဝကျော်လွန်သွားတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်ကြာချိန်နှင့်တိုက်ရိုက်မညီသောဘတ်ထရီအားသွင်းအားကောင်းသောဖုန်းများကိုတွေ့ခဲ့ရသည်မှာအတော်လေးအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သတိပြုမိသည် ကောင်းသောစွမ်းအင်ထိရောက်မှုအလုပ် ၎င်း၏အကြီးအကျယ်ဘက်ထရီအများဆုံးအထိချဲ့ရန်။
သတိပြုသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကျနော်တို့ကြီးကျယ်တဲ့ဘက်ထရီအကြောင်းပြောတဲ့အခါဒါကိုသတိပြုပါ ၎င်းသည်ကိရိယာလေးလံသည်၊ မအားအထူထူထပ်ခြင်းရှိမရှိမထိခိုက်ပါ။ အကောင့်အားလုံးအားဖြင့်ဤသဘောမျိုးဖြင့်ပုံမှန်သာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်သတိရကြရအောင်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးနှစ်ရက်ကျော်ကျော်။
ဘက်ထရီ၏နောက်ထပ်အချက်မှာ၎င်းဖြစ်သည် အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းပါတယ်။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့အသေးစိတ်အချက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီအား ၁၀၀% ခန့်ကိုမျှော်မှန်းထားသည်ထက်လျော့နည်းစေပါသည်။ အထူးသဖြင့်စဉ်းစား Poco တွင်မြန်သောအားသွင်းစနစ်ပါရှိသည် M3 ၏ box ထဲမှာ။
ဒီအပိုင်းမှာငါတို့ပြောရမယ် လက်ဗွေဖတ်စက်။ အစအ ဦး ၌ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ပထမနေရာတွင်ထင်ရှားသည့်အရာသည်၎င်း၏တည်နေရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ဗွေဖတ်သည့်ကိရိယာတစ်ခုကိုတစ်ဖက်တွင်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အမြဲတမ်းမည်သို့မည်ပုံအလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ တိကျမှုနှင့်အရွယ်အစားသည်ဤနေရာတွင်များစွာရှိသည် ဤကိစ္စသည်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုရမည်.
အပိုလုံခြုံရေးတစ်ခုအနေနဲ့ POCO M3 တွင်မျက်နှာဖုံးအသိအမှတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်သော့ဖွင့်ရန်ရှေ့ကင်မရာကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်နိုင်ချေကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်။ ငါတို့သည်လည်းမျက်နှာ၏သော့ဖွင့်ခြင်းဝါကြွားခြင်းနှင့်ဤထက်အများကြီးပိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတွက်ကျန်ကြွင်းသောအချို့ကိရိယာများကိုစမ်းသပ်ပြီးပါပြီ။
ဆက်သွယ်မှုအတွက်ငါတို့ရှာပါ ဘလူးတုသ် ၅.၀။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နှစ် ဦး စလုံးအကြောင်းပြောဆိုရန်ရှိသည် ကြီးစွာသောပျက်ကွက်; NFC နှင့် 5G။ ဤစျေးနှုန်းအကွာအဝေးရှိကိရိယာတွင် 5G မပါ ၀ င်သော်လည်း NFC မရှိခြင်းသည်၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအနည်းငယ်ကန့်သတ်ထားသည်။ Xiaomi မှအောင်မြင်စွာစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသောအလွှာကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်သည် MIUI ဗားရှင်း 12 မှာ။ ကိရိယာကိုပေးတဲ့အရာ အလွန်ကောင်းသောရှိနေခြင်း, ဒါပေမယ့်ပုံရသည် သဘာဝစီးဆင်းမှုကိုမပြီးပါစေနှင့် ထုံးစံထက်။
ဖန်သားပြင် ၆.၅၃ Full HD +
မျက်နှာပြင်ပုံစံ 19.5: 9
screen resolution 1080 X 2340 px - Full HD + ဖြစ်သည်
မျက်နှာပြင်သိပ်သည်းဆ 395 dpi
တိုးချဲ့နိုင်သောမှတ်ဉာဏ် micro SD က
Processor ကို Qualcomm Snapdragon 662
စီပီယူ Octa-Core 4x Kryo 260 2.0 GHz + 4x Kryo 260 1.8 GHz
GPU ကို Qualcomm မှ Adreno 610
နောက်ကင်မရာ Triple sensor 48 +2+2Mpx
အဓိကအာရုံခံကိရိယာ 48 Mpx
ဒုတိယပုံတူ mode အာရုံခံကိရိယာ2Mpx
Macro mode ကိုအာရုံခံကိရိယာ2Mpx
Selfie ကင်မရာ 8 Mpx
flash ကို Dual LED
ရေဒီယို FM ရေ Si
ဘက်ထရီ 5000 mAh ဘက်ထရီ
အလေးချိန် 198 ဂရမ်
ရှုထောင့် 76.8 x ကို 166.0 x ကို 9.3
စြေး 169.99 €
ဝယ်ယူ link ကို အနည်းငယ် M3
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်အရပြောရမည့်အချိန်ရောက်နေပြီ။ Poco M3 နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာကိုကြိုက်သလဲ နှင့်တိုးတက်မှုများအတွက်အခန်းတစ်ခန်းရှိသည်သောအရာ။ ဤအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေကြောင်းကိုသတိရရန်အလွန်အရေးကြီးကြောင်းထပ်ခါတလဲလဲပြောနေစဉ် ယူရို ၁၅၀ ထက်ကျော်လွန်သောအလယ်အလတ်တန်းစားကိရိယာတစ်ခု အလွန်ရှားပါးသောအင်္ဂါရပ်များပေးထားသည်။
La pantalla ၎င်းသည် Poco M3 ၏အဓိကဇာတ်ကောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူကိုမီးမောင်းထိုးပြ resolution, အရွယ်အစား 6.53 နှင့် 60 Hz ။
La 6000 mAh ဘက်ထရီ နှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည် အသုံးပြုမှုကိုနှစ်ရက်ထက်ပို.
El စြေး Poco M3 သည်သင့်အားဘတ်ဂျက်အကန့်အသတ်ရှိသည့်အခါစမတ်ဖုန်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်အလွန်လွယ်ကူစေသည်။
El ပုံစံ ဒီပစ္စည်း၏ "ကောင်းကျိုးများ" အကြားဖြစ်ရန်ထိုက်တန်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထုတ်ကုန်ဟာအရည်အသွေးနိမ့်တဲ့ပုံမပေါ်ဘဲဆန့်ကျင်ဘက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Poco M3 ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသောမရှိခြင်း NFC မရှိပါဘူးကျနော်တို့လွဲချော်သောအရာ။
La ဓာတ်ပုံကင်မရာအက်ပ် သူကအရှိန်နှုန်းကိုတိုင်းတာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တဲ့အခါပုံတွေကိုပြုပြင်တဲ့ Lac လေးတစ်ခုသတိထားမိလိုက်တယ်။
El မျက်နှာပြင်တောက်ပမှု တောက်ပသောအခြေအနေများတွင်ခြစ်ရာအထိ။
ကျွန်ုပ်တို့ 5G လက်လွတ်သည်။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီကစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးအကြောင်းကိုပြောနိုင်ပေမယ့်နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်စျေးနှုန်းကိုသိနိုင်လဲဆိုတာကိုသိရတော့မယ်။
Nuestros colaboradores para esta review , Gshopper, llegan con un importantísimo respaldo de capital que lo convierten en el primer importador electrónico del mundo para clientes comerciales နှင့် plataforma global de comercio electrónico transfronterizo para compradores globales. Graciaaun tecnología de minería de bug data consiguen descubrir los productos más populares del mundo para comercializarlos al mejor precio posible.
La misión es que los productos más populares de todos los países lleguenacualquier comprador local။ နှင့် 11 años de experiencia en la tecnología y un ADN global. Una firma con sede en Singapur ဘာတွေ့ပြီလဲ en plena expansión y que cuenta actualmente con presencia en 18 países.
အပေါ်တင်ခဲ့သည်: 8 ဧပြီလ 2021
နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက်: 11 ဧပြီလ 2021
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » NOTICIAS » reviews » Xiaomi POCO M3 ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - ၎င်းရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များနဲ့ထိုက်တန်ရဲ့လား။
သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းအားသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကြည့်ရှုရန်အခမဲ့ application (၈) ခု
Solitaires - Ultimate Collection အား Game Modes အသစ် (၄) ခုနှင့်ထို့ထက်ပိုသောအဆင့်မြှင့်ခြင်း